Izindaba - Izindlela zokwelashwa esizeni zokuphambuka kwebhande elihambayo
I-Light-duty Conveyor Belt
Abicah Rubber Cushion
Izindlela zokwelashwa esizeni zokuphambuka kwebhande elihambayo
1. Ngokuya ngosayizi wevolumu yezokuthutha, ihlukaniswe yaba: B500 B600 B650 B800 B1000 B1200 amamodeli ajwayele ukusetshenziswa njengeB1400 (B imele ububanzi, ngamamilimitha). Njengamanje, umthamo omkhulu wokukhiqiza wenkampani ibhande elihambayo le-B2200mm.
2. Ngokwemvelo yokusetshenziswa ehlukile, ihlukaniswe yaba yibhande elijwayelekile elihamba ngenjoloba, ibhande elihambayo lokushisa irabha, ibhande elihambisa iraba elibandayo, ibhande elihambisa i-acid ne-alkali, ibhande elihambisa uwoyela, ibhande elihambisa ukudla kanye amanye amamodeli. Ubukhulu obuncane bekhava yerabha emabhantshini ajwayelekile okuhambisa injoloba namabhande okuhambisa ukudla ngu-3.0mm, futhi ubukhulu obuncane benjoloba engaphansi engu-1.5mm; amabhande okuhambisa injoloba angamelana nokushisa, amabhande okuhambisa injoloba angamakhaza, amabhande okuhambisa injoloba amelana ne-alkali, namabhande wokuhambisa iraba amelana no-oyela. Ubukhulu obuncane beglue ngu-4.5mm, futhi ubukhulu obuncane bekhava engezansi ngu-2.0mm. Ngokuya ngezimo ezithile zemvelo yokusetshenziswa, ubukhulu be-1.5mm bungasetshenziswa ukukhulisa impilo yenkonzo yerabha lekhava ephezulu nengaphansi.
3. Ngokwamandla aqine ebhande elihambayo, ingahlukaniswa ibhande elijwayelekile le-canvas elihambayo kanye nebhande elinamandla le-canvas elihambayo. Ibhande elihambayo elinamandla le-canvas lihlukaniswe ibhande le-nylon elihambayo (ibhande le-NN elihambayo) kanye nebhande le-polyester elihambayo (ibhande le-EP elihambayo).
2. Izindlela zokwelashwa esizeni zokuphambuka kwebhande elihambayo
(1) Ukulungiswa kokuphambuka kwe-roller roller okuzenzakalelayo: Lapho uhla lokuphambuka kwebhande elihambayo lungelikhulu, i-roller roller yokuzihudula ingafakwa lapho kuphambuka ibhande elihambayo.
(2) Ukulungiswa okufanelekile nokuphambuka okulungile: Lapho ibhande lokuhambisa lichezuka kwesobunxele liye kwesokudla, futhi isiqondiso asilandelanga, kusho ukuthi ibhande elihambayo likhululekile kakhulu. Idivayisi yokuxabana ingalungiswa ngokufanele ukuqeda ukuphambuka.
(3) Ukulungiswa kokuphambuka kwe-roller ohlangothini olulodwa: Ibhande lokuhambisa lihlala lichezukela ohlangothini olulodwa, futhi ama-roller amaningana amile angafakwa ebangeni ukusetha kabusha ibhande.
(4) Lungisa ukuphambuka kwe-roller: ibhande elihambayo ligijima ku-roller, hlola ukuthi i-roller ayijwayelekile yini noma iyahamba, lungisa i-roller endaweni evundlile futhi ujikeleze ngokujwayelekile ukuqeda ukuphambuka.
(5) Lungisa ukuphambuka kokuhlangana kwebhande lokuhambisa; ibhande elihambayo lihlala ligijimela ohlangothini olulodwa, futhi ukuphambuka okuphezulu kusejoyintini. Isihlanganisi sebhande elihambayo kanye nolayini ophakathi webhande elihambayo kungalungiswa ukuqeda ukuphambuka.
(6) Ukulungisa ukuphambuka kwe-roller yokudonsa ephakanyisiwe: ibhande lokuhambisa linendlela ethile yokuchezuka nebanga, futhi amaqembu amaningana ama-rollers wokuhudula angaphakanyiswa kolunye uhlangothi lwendlela yokuchezuka ukuqeda ukuphambuka.
(7) Lungisa ukuphambuka kwe-roller yokudonsa: ukuqondiswa kokuchezuka kwebhande elihambayo kuqinisekile, futhi ukuhlolwa kuthola ukuthi umugqa ophakathi nendawo we-roller roller awubheki ngqo kulayini ophakathi webhande elihambayo, ne-roller roller ingakwazi ukulungiswa ukuze kuqedwe ukuphambuka.
(8) Ukuqedwa kokunamathiselwe: iphuzu lokuchezuka kwebhande elihambayo lihlala lingashintshiwe. Uma kutholakala okunamathiselwe kuma-roller okuhudula kanye nakuzigubhu, ukuphambuka kufanele kuqedwe ngemuva kokususwa.
(9) Ukulungisa ukuphambuka kokuphakelayo: itheyipu ayiphambuki ngaphansi komthwalo omncane, futhi ayiphambuki ngaphansi komthwalo osindayo. Isisindo okuphakelayo kanye nendawo kungase kushintshwe ukuqeda ukuphambuka.
(10) Ukulungisa ukuphambuka kubakaki: ukuqondiswa kokuchezuka kwebhande lokuhambisa, isikhundla silungisiwe, futhi ukuphambuka kubi kakhulu. Izinga nokuba mpo kubakaki kungashintshwa ukuze kuqedwe ukuphambuka.
Isikhathi sokuthumela: Mar-25-2021
Amadivayisi: Gate1509, C4, No. 298 Fangcheng Road, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province, Wuxi, Jiangsu, China